Ciyaar lagu Xasuusanayey Madaxii CRD oo Galabta ka dhacday Muqdisho
7/11/2012 7:38:00 P
| Comments() Muqdisho--KNN--Garoonka jaamacadaha ee magaalada Muqdisho ayaa galabta waxa lagu qabtay kulan ciyaareed lagu xasuusanayey Madaxii hore ee CRD Allaha unaxariistee C/QaadirSh.Cali Yaxye Ciyaarta oo dhexmartay Kooxaha LLP Jenyo iyo Naadiga K/cagta ee Dekadaha oo hore loogu aqoon jiray Kooxdii Badda ayaa kusoo dhamaatay waqtigii loogu talo galay bar bar dhac 1-1 ah.
Ciyaarta ayaa bareejadaasi kadib waxa labada kooxood waxa lagu kala saaray gool ku laadyo rigoorayaal ah waxaana 5-4 ay guusha ku raacday Kooxda Dekedaha.
Wasiir dowlaha gaadiidka,cirka,dekadaha Siciid Maxamed Jaamac(qoorsheel) ayaa sheegay inay farxad utahay ka qeyb galka kulankaasi lagu xasuusanayey halyeeygii ladilay ee C/qaadir Yaxye.
Qorsheel oo hore usoo maray kooxda LLP Jenyo ee galabta magacooda kooxdii ku ciyaareysay laga adkaaday ayaa uhambalyey Naadiga Badda ama Dekedaha oo wasaaradiisa hoostagta.
Sidoo kale kulan ciyaareedka markii uu soo idlaaday waxaa isna saxaafada la hadlay C/llaahi Sh.Cali (Qaloocoow) oo ah wasiiru dowlaha Wasaarada dhaliyarada iyo Sportiga DKMG isagoo umahad celiyey dhamaan intii kasoo qeyb gashay ciyaartaasi.
C/qaadir Yaxye ayaa sanadkii 2005-tii waxa kooxo hubeysan ay ku dileen magaalada muqdisho waxaana maanta laga joogay dilkiisa 7 sano iyadoo sanad waliba maanta oo kale la qabto munaasabado dadka lagu xasuusinayo waxqabadkii uu lahaa madaxii hore ee CRD.
Xasan Cabdullaahi Qeybta Sportiga KNN